Zimbabwe Inonamatirwa muZuva reKucherechedza Africa
Chivabvu 25, 2012
Munamato wekucherechedza zuva reNational Day of Prayer uyo wange wakarongwa neIntercessors for Zimbabwe, panhandare iri kuseri kweHarare International Conference Centre, wapera nechimbichimbi mushure mekunge mapurisa ati panzvimbo iyi pange pasina zvimbuzi sezvinodiwa nemutemo inoshandiswa panenge pakaungana veruzhinji.
Mapurisa ange akawanda chose panzvimbo iyi, apo mutangamiriri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende, vange vakatarisirwa kupinda pamunamato weNational Prayer Day.
VaTsvangirai havana kuzouya pamunamato uyu, uye pange paine gurukota rimwe chete rehurumende, Amai Sithemibiso Nyoni veZanu PF.
Mutauriri waVaTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, vati VaTsvangirai vatadza kuenda kumumato uyu sezvo vanga vachigadzirira kuenda kuChina.
Vange vari kutungamirira hurongwa uku, Reverend John Chimbambo, vati vange vakatarisira vanhu vanodarika zviuru makumi matatu asi vanhu vazouya vange vasingadariki mazana maviri. VaChimbambo vati munamato waitwa nevanhu ivavo vange varipo.
Zvichakadai, vafundisi vazhinji vataura pamunamato uyu vati munyika munofanira kuve nerunyararo uye veruzhinji vanofanira kunamatira vatungamiriri vehurumende nenyika kuti izvi zviitike.
Vatiwo vedzisvondo muZimbabwe vanofanira kubatana vonamata pamwe chete vachiti kusagadzikana kuri munyika kunoratidzawo kusagadzikana kuri muchechi muZimbabwe.
Ukuwo vedzisvondo dzechipositori vaitawo munamato kuZimbabwe Grounds kuHighfields uko vakasanobata chigaro chemutungamiriri wenyika, Amai Joice Mujuru, vange vari muenzi anoremekedzwa.
Kunyange hazvo, zuva iri richitorwa sezororo, zvitoro zhinji zvange zvakavhurwa uye mabhangi nemahofisi ehurumende ndiwo ange akavharwa achicherechedza zuva iri.
Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, pamwe nere MISA-Zimbabwe abatana mukucherechedza zuva reAfrica Day. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti hurumende yemubatanidzwa inofanira kumbotarisa shure kwayakabva kuitira kuti ione kuti iri kuzadzikisa here zvinangwa zveAfrican Union.
Sangano remagweta iri rinotiwo Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinangwa zvekuunza hutongo hwejekerere sezvo iri kutadza kuita sarudzo dzakachena ichiti izvi zviri kutadza kufamba nenyaya yekutadza kuzadzikisa zvibvumirano zvakaita secheafrican charter on democracy.
MISA-Zimbabwe inotiwo hurumende inofanira kuzvitarisa muchiringiro yoona kuti iri kuzadzikisa here nyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu. MISA Zimbawe yati pane mitemo yakawanda inokanganisa kodzero dzevanhu yakaita seweCriminal Law Codificaton Reform Act, uyo yati unokanganisa mabasa evatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanoti muZimbabwe hapana chekupemberera zuva iri, sezvo vari muhurumende vasiri kutevedza zviga zve African Union.
Asi mukuru weZimbabwe Youth Council, VaLivingstone Dzikira, vanoti zuva iri rakakosha zvikuru, sezvo richicheredza nhoroondo yenyika dzemu Africa.
Zuva reNational Day of Prayer rinocherechedzwa munyika mese senzira yekurangarira zuva rakaumbwa sangano reOrganisation of African Union muna 1963, iro rave kunzi African Union.
Ghana, Namibia, Zambia neZimbabwe ndidzo chete nyika dzemuAfrica dzinocheredza Africa Day sezororo.